DF Soomaaliya oo iskugu yeertay Wasaaraddaha Caafimaadka ee Dawlad gobaleedyada dalka, Maxayse kala hadashay?
MUQDISHO(P-TIMES) – Xukuumadda Faderaalka ee Soomaaliya ayaa kulan deg deg ah iskugu yeertay madaxda wasaaraddaha Caafimaadka ee dawlad gobaleedyada xubnaha ka ah dawladda Faderaalka, waxayna kala hadlaysaa arrimaha ku saabsan Caabuqa Corone-Virus, sida ugu wanaagsan ee xogihiisa loo wadaagayo, iyadoo la sameynayo wacyigalin wada jir ah.
Kulan ka dhacay shalay magaalada Muqdisho ayaa lagu soo bandhigay Istaraajiyad ay diyaarisay dawladda Faderaalka Soomaaliya, gaar ahaana wasaaradda Caafimaadka, taas oo xooga lagu saarayo sidii wadajir wax looga qaban lahaa in uusan cudurkan faafin.
Wasiiradda caafimaadka ee dawladda Soomaaliya ayaa u sheegtay dawlad gobaleedyada in ay waajib tahay in warbaahintooda iyo dadweynaha u gudbiyaan fariimaha wacyigalinta dawladda Faderaalka iyo kuwa maamul gobaleedyadu sameeyaan, si looga dheeraado in xanuunkan si fudud uu kusoo gaaro dalka Soomaaliya.
Sidaas oo kale, waxay isku raaceen dhinacyada Caafimaadku in la qaato talaabooyinkii guud ee ay soo rogtay dawladda faderaalka, oo ay ka mid ahaayeen fasaxa goobaha Waxbarashada, Shaqada laga maarmi karro iyo guud ahaanba in la joojiyo dhaqdhaqaaqyada safarka ee gudaha dalka iyo dibada oo cabsi weyn laga muujinayo.
Wasaaradda Caafimaadka Federaalka ayaa sidaas oo kale tababar kooban siin doonta shaqaalaha caafimaadka ee dawlad gobaleedyada qaarkood, si ay u baraan qaababka loo baaro xanuunkan dadka looga shakiyo, iyadoo la siinayo qalabkii uu dhawaan ku deeqay ganacsadaha u dhashay dalka Shiinaha, kaas oo si fudud u sheegaya qofka caabuqan uu hayo iyo kan kale ee caafimaadka qaba.
Dawladda Soomaaliya ayaa taxadar dheeraad ah galinaysa dhammaan sidii wacyigalin loo siin lahaa shacabka Soomaaliyeed, si looga fogaado musiibadan oo gaarta dalka, waxaana welwelka ugu weyn laga qabaa meelaha leh garoomada caalamiga ah iyo xaduudaha oo ay halis badan uga soo wajahan tahay dalka, haddii aan si degd eg ah loo qaadin talaaboyinka dawladda Faderaalka.
Ra`iisulwasaaraha Soomaaliya ayaa aduun gaaraya 5Malyan oo Dollar sheegay in ay Xukuumaddu meel dhigtay si wax looga qabto cudurkan, wuxuuna sheegay in ay lacagtaas wada gaari doonto shacabka Soomaaliyeed, sidaas oo kale ganacsatada ayuu la kulmay si wax looga qabto arrimaha sicir bararka oo aan cuntada qaali loga dhigin shacabka daalan.